Izindlela Zamuva Zobuchwepheshe Ekuthengiseni | Martech Zone
NgoLwesine, Januwari 28, 2021 NgoLwesine, Januwari 28, 2021 URachel Peralta
Ama-Smartphones ngemuva kwesitolo se-elekthronikhi. UMnyango wezingcingo eziphathwayo esitolo sezobuchwepheshe. Isitolo samagajethi sanamuhla.
Ukuthengisa yingxenye ebalulekile yezimpilo zawo wonke umuntu. Kungumshini womhlaba wonke owenzelwe ukuletha nokusebenzela amakhasimende ezizweni zonke. Abantu bakuthokozela ngokulinganayo ukuthenga ezitolo zezitini nodaka neziku-inthanethi. Ngakho-ke, akumangazi ukuthi imboni yokuthengisa yomhlaba wonke kulindeleke ukuthi kufinyelele ku- $ 29.8 trillion ngo-2023. Kepha, ngeke ikwazi ukuzenzela yodwa.
Kunezizathu eziningi imboni yezitolo edinga ukugcina ijubane nentuthuko yakamuva yezobuchwepheshe. Ukulandela izinguquko nokuzamukela kuzovumela ukwanda okukhulu kakhulu kwemboni yezitolo.
Sibutsetelo Esifushane Somlando Wezitolo Zokuthengisa
Izitolo zokuthengisa azihlali zithembele ku-inthanethi ukusebenza. Ekuqaleni, abantu babeshintshana ngempahla nangezinkomo futhi basebenze kanzima ukuze babe nezinto eziningi abangazinikela ngazo. Izitolo zokuqala zokuthengisa zavela cishe ngo-800 BC. Izimakethe zaqala ukuthuthuka lapho abathengisi bathengisa khona izimpahla zabo. Inhloso yezimakethe kwakuwukuthenga imikhiqizo kodwa futhi nokuzijabulisa.
Ukusuka lapho, ukuthengisa kwaqhubeka nokukhula. Ngawo-1700, kwaqala ukuvela izitolo ezincane, eziphethwe ngumama nomndeni. Phakathi maphakathi nawo-1800 kanye nasekuqaleni kwawo-1900, abantu babevula izitolo zokuqala. Njengoba amadolobha namabhizinisi athuthuka, kwafika irejista yokuqala yemali, elandelwa ngamakhadi wesikweletu nezitolo ezinkulu.
Shesha phambili enkathini ye-inthanethi. Ukushintshaniswa kwedatha ye-elektroniki (i-EDI) ngawo-1960 kwavula indlela ye-ecommerce eyakhuphuka esihlalweni sobukhosi ngawo-1990 lapho i-Amazon ingena endaweni yesehlakalo. Ukusuka lapho, ukuthengisa bekuncike kakhulu kubuchwepheshe, futhi i-ecommerce iqhubeke nokwanda sibonga i-intanethi. Namuhla, imithombo yezokuxhumana inikeza amathuba amaningi wokukhangisa, kepha abanikazi bamabhizinisi kufanele babheke indlela yokuziphatha kwamakhasimende eshintsha njalo ukuze bahlale kulo mdlalo.
Izindlela ezintsha zokuthengisa
Izitolo ezidayisa kakhulu zixhunyaniswe ne-intanethi kanye nokuhlaziywa kokuziphatha komuntu. Kunezinto eziningi kakhulu okufanele uzicabangele:
Noma kunjalo, akupheleli lapho. Imboni yesimanje yokudayisa idinga ukudala ulwazi olumnandi lwamakhasimende ngoba abantu banesineke esincane kulezi zinsuku. Njengoba uPhilip Green asho, “Abantu bahlale beyothenga. Imizamo yethu eminingi ithi: 'Sikwenza kanjani ukuthi ulwazi lwezentengiso lube olukhulu?' ”
Njengoba i-intanethi iletha ezinye izindlela zokufinyelela kubathengi, abathengi babona ukuthi banamandla amakhulu kunanini ngaphambili. Namuhla, abantu badinga imizuzwana embalwa ukwenza isinqumo, futhi kuthinta indlela ama-brand axhumana ngayo nezithameli zabo. Ungathola imininingwane eminingi ngokuziphatha kwabathengi lapha.
Ukufeza izinga lokweneliseka okuphezulu, abathengisi basebenzisa ubuchwepheshe kuzo zonke izinqubo. Nakhu ukuthi kanjani.
Ukulandela okulandelwayo - Ukushintshaniswa Kwemininingwane ye-elekthronikhi (i-EDI) kuvumela ukushintshaniswa kwamakhompiyutha ngebhizinisi nekhompyutha. Iyanciphisa izindleko, inyusa isivinini sokudluliswa kwedatha, inciphise amaphutha, futhi ithuthukise ukubambisana kwebhizinisi. Inika amandla ukulandelela okwenziwe lula kokuthengiselana phakathi komhlinzeki nesitolo.
Ukugcwaliswa okuzenzakalelayo izinhlelo - lezi zinhlelo zisebenza cishe kuyo yonke imboni, zisiza abathengisi ukuzenzekelayo nokwandisa ukugcwaliswa kwemikhakha eminingi yemikhiqizo, kusuka kumkhiqizo omusha kuye ezingutsheni. Njengoba inqubo izenzekelayo, abasebenzi bangagxila emsebenzini wabo ngaphandle kokwesaba imikhiqizo elahlekile noma eyonakele emashalofini.
Amashalofu abonakalayo - izitolo ezidayisa ikusasa mhlawumbe ngeke zibe namashalofu agcwele imikhiqizo. Esikhundleni salokho, bazoba nayo izidleke zedijithali lapho amakhasimende angakwazi ukuskena imikhiqizo. Ngandlela thile, lokhu kuzoba ukunwetshwa kwezitini nodaka kuwebhusayithi yomthengisi, ukuhlinzeka ngesipiliyoni sokuthenga esingenamsebenzi ngempela.
Ama-AI ayabhaliswa - Izinhlobo ezintsha zamarejista zivumela amakhasimende ukuskena izinto zawo ngaphandle kocashier. Amarejista ama-Smart ayisixazululo sakamuva sokwenza isipiliyoni samakhasimende asamanzi. Kodwa-ke, kusekhona indawo yokukhula nokwenza ngcono amasistimu wokuqashelwa kwento, ukuhlonza ikhasimende, nezinkokhelo.
I-AR ne-VR ekuthengiseni - enye into entsha yezobuchwepheshe ethuthukisa ulwazi lokuthenga yiqiniso elingokoqobo futhi elingathandwa kwabathelisi esikubona. Ngenkathi abathengi bezijabulisa bezama izingubo noma behlola ifenisha ngendlela ebonakalayo, amabhizinisi ajabulela izindleko ezincishisiwe. I-AR ne-VR nayo iyanikela ezinye izindlela zokumaketha nezinhlelo zokusebenza ezisebenzisanayo nezibandakanya kakhulu.
Amabhekhoni okusondela - ama-beacons amadivayisi angenazintambo angathola abasebenzisi befoni ephathekayo. Lawa madivayisi asiza izitolo ukuthi zihlanganyele namakhasimende alande uhlelo lwabo lokusebenza lwefoni ephathekayo. Ngama-beacon, amabhizinisi angaxhumana namakhasimende, abambe iqhaza ekukhangiseni kwesikhathi sangempela, andise ukuthengisa, aqonde indlela yokuziphatha kwamakhasimende, nokuningi.
Ukuthumela okuzenzakalelayo - i-shipping automation yonga isikhathi esibalulekile esingasetshenziselwa ukwenza izinqumo noma ezinye izinqubo. Izinkampani zisebenzisa isoftware ukusetha imithetho yama-oda wokuthumela, isibonelo. Amabhizinisi nawo angazenzela amalebula wokuthumela, amadokhumende wentela, uhlu lokukhetha, amasiliphu wokupakisha, njll.
Robotics - amarobhothi ngokuqinisekile azothatha eminye imisebenzi yabantu. Njengokuthi babulala amagciwane ezibhedlela ngesikhathi sikabhubhane we-coronavirus, amarobhothi angasetshenziswa futhi ukuhambisa izimpahla emashalofini, uhlaziye uhlu lwempahla, bese uhlanza. Bangaphinda bathathe indawo yesevisi yamakhasimende esitolo noma baxwayise ngezingozi zokuphepha.
Izitolo zidayisa ibanga elide kusuka ezitolo zomama-ne-pop ziya emashalofini abonakalayo. Ahlanganiswe nokuthuthukiswa kobuchwepheshe, amabhizinisi okudayisa aphila futhi amukela izinguquko zobuchwepheshe. Namuhla, basebenzisa zonke izindlela ezitholakalayo ukukhulisa isisekelo samakhasimende futhi banikeze ukuthenga okungenamthungo.
Izitayela zobuchwepheshe zakamuva, njengamarobhothi, ukuthunyelwa okuzenzakalelayo, iqiniso langempela, kanye namabhikhoni okusondela, kusiza amabhizinisi ukuthi ahlale eyingxenye ebalulekile yezimpilo zabantu. Izinkampani manje sezingasebenzisa ezinye izindlela zokumaketha ezihlanganiswe nesipiliyoni sokuthenga esithuthukisiwe ukukhombisa imikhiqizo yazo nokufakazela ukuthi uhlobo lomkhiqizo wazo lubalulekile.
Tags: amaRejistaukuhlakanipha okungekhona okwangempelaUkungathandwa kwabathelisi esikubonaokuzalisa kabusha izinhleloyokusungula kokulandelaukusondela emabhekhoniuphawu lokudayisaukumaketha okuthengiswayoamarobhothi okuthengisaimithombo yezokuxhumana edayisaubuchwepheshe bokuthengisaizitayela zokuthengisaisipiliyoni somsebenzisi wokuthengisaukwakhiwa kwewebhu okuthengiswayoesingokoqobo virtualamashalofu abonakalayo
URachel wasebenza embonini yezezimali yamazwe omhlaba cishe iminyaka eyi-12 eyamvumela ukuthi athole ulwazi futhi abe ngumqeqeshi onekhono, umqeqeshi nomholi onekhono. Ukujabulele ukukhuthaza amalungu eqembu nabalingani beqembu ukuthi baqhubeke nokuziphilisa. Wazi kahle ngokusebenza, ukuqeqeshwa, kanye nekhwalithi endaweni yamakhasimende.
Shintsha Ukwakhiwa Kwe-REST API Yakho, Iphaneli Yokulawula, kanye Nemibhalo Yeposi